Maxaa ka guuxaya maanka Dr Abiy Axmed? | Radio Hormuud
Ninka ku guulaystay biladda nabadda ee Nobel Abiy Ahmed ayaa gilgilay Itoobiya tan iyo intii uu rail'sul wasaaraha noqday bishii April sanadkii aanu soo dhaafnay.
Ereygan oo ah af-Amxaari ayaa micnihiisu yahay "wax dheeraad ah ", balse waxaa sidoo kale lagu fasiraa "isu imaanshiiyo ", waana wax uu u arko ra'isul wasaare Abiy in ay tahay qaab gaar ah oo loo wajihi karo dhibaatooyiinka ka jira Itoobiya.
Muxuu yahay mab'dda ahaan ereyga medemer?
"Waxa aan u baahanahay madax-banaani iyo falsafad ka turjumaysa hab dhaqanka Itoobiya taasi oo xallin karta dhibaatadeena islamarkana isku keen xiri karta," waxa uu sidaasi ku qoray buugiisa Medemer.
Waxa uu ku doodayaa in la tixgaliyo dhaqanka,mabaa'dida,is dhex galka iyo wada shaqaynta.
Bishii Abriil, khabiirka lafa gura siyaasadda Hilina Berhanu ayaa sheegay in inkastoo medemer si sahlan loo fahmi karo "uuna xanuun baab'iye "u yahay dhibaatadii hore ee dhacday,hadana uusan lahayn qaabkii dhibaatooyinka mustaqbalka loo wajihi lahaa.
Guddiga Norway ee u qaabilsan abaalmarinta Nobel-ka ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen ku sheegay in Abiy Ahmed uu ku muteystay "nabadda uu la galay dalka ay collaada mudada kala dhexeysay ee Eritrea".
Mr Abiy ayaaa bilaabay ka hadalka medemer ka hor inta uusan rai'sul wasaara noqon.
Hadda oo uu rai'sul wasaare yahay waxa uu sheegay in medemer lagu daaweyn karo dhibaatooyiinka isku dhacyada qoomiyadaha dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika.
Haddii aysan taasi dhicin waxa uu ka digay in jiritaanka dalka ay su'aal gali doonto.
Bishii Oktoobar,waxaa soo baxday calaamad muujinaysa in qof waliba aysan ka gadmin aragtida Mr Abiy, qaar ka mid ah dibadbaxayaal ayaa gubay nuqullo ka mid ah buugiisa, iyaga oo ku qaaylinayay "medemer ha dhacdo, ".
Hoggaanka xisbiga Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) ayaa waxay ku tilmaameen aragtida rai'sul wasaaraha mid aan kala cadeyn.